Vitsy amin'ireo mpandeha mandehandeha ny làlan-kaleha, noho izany dia ilaina ny fahalalana ny fitsipika momba ny fitaterana entana eny amin'ny fiaramanidina ho an'ny mpanjifan'ny serivisy rehetra. Tsara homarihina fa ny fitsipika momba ny lalànan'ny fiaramanidina sy ny entam-barotra, miaraka amin'ny fitsipika avotra amin'ny fiaramanidina sy ny entam-barotra, izay efa nisy hatramin'ny 2007, ny orinasam-pifandraisan'ny mpandeha dia manana ny fitsipika manokana. Saingy tsy maintsy mifanaraka amin'ny fepetra takin'ny federaly izy ireo.
Ny fitsipika entina mitondra entana eny amin'ny fiaramanidina
Ny mpandeha rehetra (ankoatra ny zaza latsaky ny 2 taona) dia manan-jo hitondra entana maimaim-poana 10 kg farafahakeliny. Araka ny voalazan'ny fitsipika anatiny, ny lanjan'ny fahazoan-dàlana ny entana manontolo ao amin'ny fiaramanidina, mitondra maimaim-poana, dia miankina amin'ny kilasin'ny tapakila nividy:
ho an'ny kilasy ekonomika - 20 kg;
ho an'ny kilasin'ny orinasa - 30 kg;
ho an'ny kilasy voalohany - 40 kg.
Fa ny entan'ny mpandeha tsirairay, araka ny fitsipika, dia misy toerana ao amin'ny entana entana. Ho an'ny kilasy ara-toekarena, ny seza 1 ka hatramin'ny 2 dia atolotra (izany dia miankina amin'ny fiaramanidina), ho an'ny kilasin'ny orinasa sy ny kilasy voalohany dia misy toerana 2 foana. Amin'izay fotoana izay ihany, ny refy maivana amin'ny entana eny amin'ny fiaramanidina iray, izay manisa-panajàna amin'ny toetr'andro 3, dia manana ny dian-dry zareo, miankina amin'ny kilasin'ny serivisy.
kilasy fandraharahana ary kilasy voalohany - 203 cm;
kilasy ekonomika - 158 cm.
Raha mihoatra ny fepetra napetraka ny lanjany na ny haben'ny entana eny amin'ny fiaramanidina, dia ilaina ny mandoa ny fitaterana azy. Mariho ihany koa fa ny entana fanampiny dia horaisina raha misy fahafahana maimaim-poana ao anaty fiaramanidina. Noho izany, raha manana lanjany lehibe na lanjan'ny entana ianao, dia ekeo alohan'ny mialoha ny solontenan'ny fitantanana ny orinasa ary mametraka toerana ho an'ny entana.
Inona no azonao entina amin'ny fiaramanidina?
Eo ambanin'ny lalàna dia voarara tanteraka ny fitaterana:
baomba, baomba, cartridges, pyrotechnics;
gaza isan-karazany, anisan'izany ny entona gasikara;
bakteria marefo sy mangatsiaka (ovy, gazoline, aceton, sns.) ary singa mafy loko;
toxic, radioactive substances;
fitaovam-piadiana (ankoatra ny fahazoan-dàlana manokana araka ny lalàn'ny Federasiona Rosiana).
Raha azo atao amin'ny fitaterana entana dia azo atao ny mivezivezy ao anaty fiaramanidina:
kalozana mangatsiaka, fitaovam-piadiana ho an'ny fisamboaran-drano ambanin'ny tany, fanjary fitaovam-piadiana;
Ny zava-pisotro misy alikaola misy tanjaka tsy mihoatra ny 70% ao anaty tahiry nividianana amin'ny varotra varotra, ny mpandeha dia tokony tsy manana 5 litatra;
Ireo aerôsôl ao amin'ny sehatra anatiny sy ara-panatanjahantena ao anaty baolina kanto izay misy kapa proteinina, fa tsy mihoatra ny 2 kg.
Tsy voatery haka ny entana ianao, fa tsara kokoa raha entina miaraka aminao ao anaty entana mitondra entana :
taratasy, vola, vola, fiantohana fiantohana;
zava-tsarobidy, anisan'izany ny firavaka sy fitaovana elektronika;
Ahoana ny fametrahana entana any anaty fiaramanidina?
Mba hisorohana ny tsy fahazoan-dàlana noho ny fisotroana rano avy amin'ny valizy manaraka ary hamenoana ny akanjonao, dia manoro hevitra izahay mba hameno tsara ny zavatrao ao anaty kitapo cellophane.
Andriamatoa : karazana karazana sasany, anisan'izany ny biby sy zavamaneno, dia azo entina amin'ny saran-dalana, na inona na inona. Ho an'ny fitaovana mendrika indrindra na marefo dia mila mividy tapakila amin'ny habak'izy ireo ianao. Ny fametrahana seza misy kodiarana sy kodiarana amin'ny seranam-piaramanidina rehetra dia maimaim-poana.
Raha mampiasa ny serivisy ianao, indrindra raha efa manidina ity orinasa ity ianao, dia manoro hevitra ny mamaky ny fitsipika ho an'ny mpandeha aloha ianao mba hianatra momba ny zonao sy ny andraikitrao. Any amin'ireo orinasam-pitaterana an-dalamby dia misy bokikely misy fitsipika maromaro.
Sarin'ny Sheremetevsky any St. Petersburg
Gresy - Visa ho an'ny Rosiana 2015
Phi Phi, Tailandy
Restôranta any Arkhangelsk
Ahoana no hametrahana dobo filatsahan-drivotra miboiboika ao amin'ny firenena?
Nosy Ischia, Italia
Sakafo ao Khrushchev - tsiambaratelon'ny fandrindrana
Heliotrope - fambolena sy fiahiana
Kim Kardashian sy ireo rahavaviny dia nandray anjara tamin'ilay sarimihetsika "Eight Ocean Girlfriends"
Ny sakafo tsara
Myasthenia gravis - fitsaboana sy toetrandro
Ahoana no fomba hialana amin'ny Lalàn'i Judas sy Philip Koon any Los Angeles?
Haibibem-bongony - inona no modely amin'ny fisafidianana sy ny fomba fitafy?
Toe-kiran'ny ririnina Ecco
Taratasy misy soratra - master-class
Ny faniriana - ny zava-drehetra momba ny kitapo iray amin'ny soroka
Arnold Schwarzenegger avy amin'ny tanan'ny Filoha frantsay Francois Hollande dia nahazo loka lehibe
Ny hodi-maso fahatelo amin'ny saka - fitsaboana